WAR CUSUB: Rocco Commisso oo qarka u saaran inuu iibsado AC Milan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha WAR CUSUB: Rocco Commisso oo qarka u saaran inuu iibsado AC Milan
WAR CUSUB: Rocco Commisso oo qarka u saaran inuu iibsado AC Milan
(New York) 26 Juun 2018 – Sida uu tebinayo hilinka Sky Sports, waxaa dhici karta inuu war hor lihi kasoo kordho dhanka iibka Milan oo uu doonayo Talyaani Maraykanka Rocco Commisso, iyadoo la sheegayo inuu heshiisku dhici karo isla saacadaha yar ee soo aaddan.
Sky Sport Italia wuxuu intaa raacinayaa in Rocco Commisso uu Milan la wareegi karo berritoole, isagoo Yonghong Li u reebaya saami yar oo gaaraya 15-20 boqolkiiba.
Bilyaneerkan iska leh kooxda New York Cosmos ayaa kooxda Milan ku doonaya €500m oo lagu daray damaanadda qaan dhan €380m oo ay Milan ku leedahay hay’adda coomaadda ah ee Elliott Management.
Ninkan ayaa doonaya inuu si deg deg ah ula wareego 100 boqol naadiga, xitaa 15-20 boqolkiiba uu marka hore yeelanayo Mr Li. Wada xaajood qarsoodi ah oo 40 maalmood soo socdey ayaa haatan mira dhali raba.
Dad ku dhow Mr Yonghong Li ayaa sheegay inay badrooniga Shiinayska ah ka go’an tahay inuu kooxda iibiyo, waxaana xitaa New York u duulay qarreenka Milan ee Roberto Cappelli waloow aan la hubin inuu dano shakhsi ah u aadey iyo in uu heshiiska dartii ugu duulay.
Previous articleWAA CUSUB: Ethiopia iyo Eritrea oo isa soo hor fariistay 20 sanno oo colaad ah kaddib + Sawirro
Next articleGOOGOOSKA: Nigeria vs Argentina 1-2, Iceland vs Croatia 1-2 (Messi oo soo baxay)